XOG: DF oo laamaha amniga u gudbisay qorshe cusub oo lagu sugayo amniga Muqdisho | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: DF oo laamaha amniga u gudbisay qorshe cusub oo lagu sugayo...
XOG: DF oo laamaha amniga u gudbisay qorshe cusub oo lagu sugayo amniga Muqdisho
Laamaha Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa amar ku bixiyay si loo sugo amniga magaalada Muqdisho ineysan gudaha magaalada soo gelin gaadiidka Xamuulka iyo dadweynaha sida ee ka yimaada Gobolada dalka.
Taliyeyaasha Ciidamada Baraha Kontaroolada laga soo galo magaalada ee Labada Maslax & Siinka Dheer ayaa lagu amray ineysan soo deyn karin gaadiidka soo gelaya magaalada Marka laga reebo gaadiidka BL-ka loo yaqaano ee dadweynaha qaada,kuwaasi oo isaga kala goosha Muqdisho iyo deegaanada kale ee ku xeeran.
Sidoo kale, Gaadiidka dadweynaha ee magaalada soo galaya (BL), ayaa la amray ciidamada iney si adag u baraan,islamarkaana hubiyaan marka laga soo tago dadweynaha agabyada kale ee ay sidaan.
Inkastoo adkeyn baaritaanka ciidamada gaadiidka soo geliya hadana waxaa jira gaadiid kale oo damiin lagu soo geliyo magaalada Muqdisho.
Labada Gobol ee Shabeellooyinka ayaa waxaa inta badan ka yimaada gaadiid sida Qudaarta nuucyadooda kala duwan iyo dhuxul,kuwaasi oo iyagoo la baarin iska soo gala magaalada,islamarkaana Al-Shabaab si fudud ugu soo qarin karaan walxaha Qarxa.
Dowladda Federaalka ayaa maaro u la’ sugida amniga magaalada Muqdisho,iyadoo ay xiran yihiin inta badan wadooyinka magaalada hadana wali qaraxyada iyo dilalka qorsheysan waa ay dhacaan.